अषोज २०, २०७८ बुधबार 109
काठमाडौँ । भुत्तिया दहमा डुबेर एक युवाको मृ:त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा मोरङको सुन्दरहैंचा नगरपालिका-४ बलिया निवासी अन्दाजी वर्षको २२ को शिखर सिलवाल रहेका छन् । उनको नुहाउने क्रममा डु’बेर मृ’त्यु भएको हो । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उदयपुरको बेलका नगरपालिका-५ स्थित झरनामा नुहाउने क्रममा चि’प्लिएर सो दहमा खस्दा मध्याह्न १२ बजे सिलवाल बे’पत्ता भएका थिए । बे’पत्ता भएका सिलवाललाई इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर र स्थानीयको सहयोगमा खोजी कार्य थालेको थियो ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
खोजतलासका क्रममा उनको श’व साँझ ५ बजे फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रायः गर्मीको समयमा स्थानीयवासी र बाहिरबाट आउने युवायुवतीहरू उक्त दहमा पौडी खेल्ने गर्दछन् । पौडी खेल्ने क्रममा केहीको मृ’त्यु भइसकेको छ भने धेरै युवावुतीहरु ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
घा’इ*ते भएर घर फर्कने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । स्थानीयहरूका अनुसार बेलका नगरपालिकाले त्यस दहलाई पर्यटकीय स्थलको सूचिमा राख्दै आएको छ भने गर्मीको समय र बिदाको दिन ठूलो सङ्ख्यामा पौडी खेल्नहरु आउने गरेको छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevसामान्य बिरामी भएर अस्पताल लगिएकी ३ बर्षीय बालिकाको मृ’*त्यु : अस्पतालको ला,प’रवाही ले ज्या’न गएको आ’*रो’प
Nextदशैं आउँदैछ बैंकमा पैसा निकाल्न जाँदै हुनुहुन्छ? होसियार २ मिनेट समय दिएर यो अवश्य पढ्नुस
एकसाथ संसार भर किन बन्द भए ! फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप
अहिलेसम्मकै उदारणिय बिहे भयो नवलपरासीमा। फिनल्याण्डबाट बिहे गरे नेपाली केटाले। (हेर्नुहोस भिडियो) भिडियो